- मुखले मीठा कुरा गर्ने यो सरकार व्यवहारमा सामन्ती बन्दैछः सुशीला कार्की
मुखले मीठा कुरा गर्ने यो सरकार व्यवहारमा सामन्ती बन्दैछः सुशीला कार्की
काठमाडौं: पूर्व प्रधानन्याधीश सुशीला कार्कीले वर्तमान सरकार व्यवहारमा सामान्ती भएको आरोप लगाएकी छन्।
डा. गोविन्द केसीको माग र उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी दिन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा विपन्न वर्गको हितमा आफ्नो अडान राखेका डा। केसीलाई सरकारले बेवास्ता गर्दै समन्ती व्यवहार देखाउनु गलत भएको कार्कीले बताएकी हुन्।
उनले भनिन्, ‘सरकार शोषक सामन्तीको लाइनमा गयो। सरकारमा गएपछि जोसुकै पक्षले पनि शोषक समूहलाई सहयोग गर्ने परिपाटी बस्यो। मुखले मीठा सैद्धान्तिक कुराकानी गर्ने, व्यवहारले सामन्ती बन्दैछ। यसरी पिडितलाई कसरी न्याय मिल्छ कसरी व्यवस्थामा परिर्वतन हुन्छ ?’
उनले एउटा व्यक्ति आफ्नो परिवारलाई नभएर गरीब र दूर दराजका जनताको लागि लड्छ भने त्यस्तो व्यक्तिको विरोध गरी सरकार व्यापारी र मुनाफा कमाउनेको पक्षमा लाग्छ भने सरकार सामान्ती नभनेर के भन्ने भन्दै प्रश्न समेत गरेकी थिइन् ।
उनले भनिन्, ‘गोविन्द केसी गरीबका छोरा छोरी र दूर दराजका जनताको लागि लडेका छन् के यो नाजाय हो ? सरकारले तत्काल माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको माग छ। ‘५०/६० लाख खर्च गरेर चिकित्सक बन्न पर्ने अनि २० हजार तलबमा काम गर्न पर्ने सरकारको यो कस्तो नीति होर?’ उनले प्रश्न गरिन्।
गंगामायाको प्रसंगलाई लिएर आफू रातीमा झस्किने गरेको सुनाउँदै उनको साहसलाई उच्च सम्मान गर्दै तत्काल न्याय दिलाउन सरकारसँग माग समेत गरिन। ‘न्याय नपाएर गोरखाबाट सिंहदरबार आइपुगेकी अबला नारीलाई सरकारले भिमेसन थापाकी श्रीमतीलाई झैँ गरेर नंग्याउन खोजेको उनको आरोप थियो ।
माथेमा प्रतिवेदनका संयोजक तथा शिक्षाविद केदारभक्त माथेमाले सरकारले गलत नियतले प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको बताए। उनले भने, ‘अहिलेको प्रतिस्थापन विधेयक जनतामारा छ। जनतालाई हित गर्दैन। काठमाडौँमा मात्रै मेडिकल कलेज थुप्रिँदा गाउँमा मानिसहरु मरिरहेका छन्।’
आफ्नै अस्पताल सञ्चालन बिना मेडिकल कलेज खुल्दा प्राक्टिस बिनाको थ्योरी पढेका डाक्टर मात्र उत्पादन हुने उनको तर्क छ। उनी भन्छन्, ठूलो अस्पताल भएको मेडिकल कलेज भयो भने डाक्टरहरु दक्ष उत्पादन हुन्छन्। तर अहिले अस्पताल बिना कलेज खोल्न दिने कुरा छ। त्यसरी बिना प्राक्टिस कस्ता डाक्टर बन्न सक्लान् ?
उनले मेडिकल कलेजको पढाइ सैद्धान्तिक मात्र नभई प्रयोगात्मक पनि हुने भएकाले सीपयुक्त डाक्टर उत्पादन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए।